people Nepal » उमेर बढ्दै जादा किन बढ्छ हड्डी खिइने समस्या ? भिडियो सहित उमेर बढ्दै जादा किन बढ्छ हड्डी खिइने समस्या ? भिडियो सहित – people Nepal
उमेर बढ्दै जादा किन बढ्छ हड्डी खिइने समस्या ? भिडियो सहित
Posted on July 4, 2017 by Durga Panta
हड्डी किन खिइन्छ ? र यसबाट बच्ने उपाय के के हुन् ? हाड जोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर सगुन कुमार जोशीको सुझाब यस्तो छ : स्वस्थ शरीरको लागि हड्डीको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ ।
मानिस अपांग हुने प्रमुख कारण मध्ये हड्डीले आवश्यक काम नगर्नु पनि एक हो । हड्डी परिपक्क वा बलियो हुने भनेको २५ देखि ३५ वर्षको उमेर सम्म हो । हड्डी खिइने रोग धेरैमा हुन्छ । उमेर बढ्दै जादा वा ४०/५० वर्ष पुगेसँगै यो रोगले बढी च्याप्ने गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलानामा महिलामा यो रोग बढी देखिन्छ । प्रायजसो महिनावारी सुकेपछि वा पाठेघर निकाले पछि यस्तो समस्या बढ्छ । हड्डी खिइने प्रमुख कारण : सबै जनालाई एकै कारणले मात्र हड्डी खिइन्छ भन्ने छैन् ।
विशेषतः यस्ता छन् हड्डी खिइने कारण :
शरीरलाई बढी कसरत पर्ने काम गर्नु । हड्डीमा चोटपटक लाग्नु । भिटामिन डिको कमी । मांशपेशी कमजोर हुनु । लामो समय उभिएर वा निहुरिएर वा एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नु । अत्याधिक धुम्रपान तथा मध्यपानको सेवन ।
बाथ, मधुमेह लगाएतका रोग हुनु । सानो उमेरमा लडेर हड्डीमा चोट पटक लागे पछि हड्डी खिइने हुन्छ । लक्षणहरु : हड्डी दुख्ने । हड्डी सुन्निने ।
लामो समय बसे पछि उठ्न गाह्रो हुने । बस्न गाह्रो हुने यस्ता व्यक्ति बढी जोखिममा बढी शारीरिक कसरत गर्ने । खेलाडी । बढी तौल भएका । बच्न उपाए : दुखेको ठाउँमा विशेषज्ञको सल्लाह बमोजिम फिजियोथेरापी गर्ने ।
सन्तुलित आहारा खाने । सक्रिय जीवनशैली जीउने । धेरै समय निहुरिएर वा उभिएर वा कुर्सीमा बसेर काम गर्नु पर्ने भए समय समयमा आराम गर्दै गर्ने । लामो बाटो सवारी चलाउँदा ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै चलाउने । तौल नियन्त्रणमा राख्ने ।